Ziqale ngesasasa iziqephu zocansi kwithelevishini
UNGOTI wezobudlelwano nezothando, uDkt Nomcebo Mthembu obuye azwakale nakwiGagasi FM, uthathe abaningi ngesiqephu sokuqala seNyan’ Nyan kwiSABC 1 Isithombe: SITHUNYELWE
Bongiwe Zuma | September 10, 2021
ABAWUVALI umlomo abantu ezinkundleni zokuxhumana emuva kokudlala kwesiqephu sokuqala ngqa seNyan' Nyan esinongoti wezobudlelwano nocansi.
Ababukeli balolu hlelo oludlala ngoLwesibili ngo-9 ebusuku kwiSABC 1, yize bebekulindeleke ukubona uDkt Nomcebo Mthembu kodwa basale beshaywa ngamahloni ngezithinta ucansi.
Abalandeli beNyan’ Nyan eyethulwa nguLuyanda Potwana, babhale ekhasini lakwiFacebook beveza ukuthi bebengalindele ukuthi ezinye izinto zingabekwa ngembaba ngoba impilo yabamnyama iyawagigiyela amagama ocansi.
Babodwa abathi mhlambe isikhathi sidinga ukuphinde sihlehliswe kodwa nakhona kuhlukene imibono, abanye bathi sikahle lesi sikhathi yikhona abazali bazofunda nokulalisa izingane ngesikhathi.
"Angifuni ukuqamba amanga, lolu hlelo luzosiza izithandani eziningi ngoba abantu abafuni ukuyofuna usizo kodwa manje seluza kubo manje. Lalisani izingane ngesikhathi," kusho u-Olwethu Maka-Otha Songca.
Abanye bathi lolu hlelo lushaya emhlolweni futhi sekuyisikhathi sokuthi kukhulunywe ngezocansi ukuze abantu bezofundiseka, luyeke ukuba ihlazo.
"Akumele sibe namahloni ngezocansi, kufanele zisakazwe izinhlelo zalo ngoba izikhathi zishintshile. Intsha eningi isizibandakanya nocansi, abazali kumele balibukele uhlelo nezingane zabo ukuze zifundiseke," kusho uThabo Mojalefa ongumbukeli.
UDKT Mthembu uthe ubekulindele lokhu futhi abantu kuzobathatha isikhathi ukuthi bavuleleke ngezinto ezithinta inkonzo yasekamelweni. Ukulumela kwamagama kwabanye uthe kuhambisana nakho ukusaba ukuthi noma belwenza ucansi futhi belithakasela kodwa balithatha njengehlazo.
"Iqiniso lithi, siyindlu emnyama ziningi izinto esizifunda manje nebezingakhulunywa kuthathwa njengokuthi ziyihlazo. Ikakhulu uma ungumuntu wesifazane ukukhuluma ngocansi, kunzima ngisho kubantu abathandanayo. Kuningi uhlelo oluzobalekelela ngakho abantu, libafundise, libanikeze nezisombululo. Zikhona nezinye izimo zempilo esizozithinta, izinkinga eziningi ziqala ekamelweni kwizithandani nasemakhaya," kusho uDkt Mthembu.
NgoLwesithathu lize lashona kuchwaza ezinkundleni zokuxhumana okubalwa nakwiTwitter, abantu belokhu bebabaze njalo abangalubonanga uhlelo, bebuza impinda.